Iklabhu yasebusuku eBodwa eBalaseleyo eLouis XIII yokubonelela nge-Ultra-Rare Red Decanter N ° XIII
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iklabhu yasebusuku eBodwa eBalaseleyo eLouis XIII yokubonelela nge-Ultra-Rare Red Decanter N ° XIII
Kukho ii-decanters ezibomvu ezingama-200 N ° XIII ezikhoyo kwihlabathi liphela, oko kuthetha ukuba ukuhanjiswa kunqunyelwe kwisigqibo esinye kwiklabhu nganye ngobusuku.
U-LOUIS XIII cognac sisiphumo sempumelelo yobomi bezizukulwane ze-Cellar Masters, edibanisa eyona-eux-de-vie egqibeleleyo esebenzisa iidiliya ezilinywe kuphela eGrande Champagne. Kubalulekile ukuba u-LOUIS XIII abe namava njengesiko, ehle ngethontsi, ukuveza intetho eqhubekayo kunye eguqukayo yencasa, ngomzuzu omnye wokugqwesa. Abathengi abafuna ukuzama ithamsanqa labo ngoku-odola enye yamava e-N ° XIII banokungena kwi-LOUIS XIII Society * okanye bathenge ngokuthe ngqo kwiiklabhu zasebusuku ezikhethiweyo. Ummeli wegama likaLOUIS XIII uya kuqhakamshelana ngamnye kubo ukulungiselela lo msebenzi ukhethekileyo. Amava akhethekile kangangokuba kukho ithuba elikhulu lokwamkelwa kwimishini yendawo.
I-N ° XIII yokuqala yokufika e-US iya kutyhilwa ngo-Okthobha u-15 e-OMNIA eLas Vegas. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokufumaneka kwemveliso, qhagamshelana: [imeyile ikhuselwe]
YONZA IXESHA NGOKUQHELEKILEYO
Ixesha yinto ekrwada kaLOUIS XIII, kunye no-N ° XIII esivumela ukuba siphonononge intetho entsha yexesha. Ubomi bobusuku buchazwa yimvakalelo yenkululeko, ukonwaba kunye nokubhiyozela, zonke ezo zinto zifakwa zaza zandiswa yi-N ° XIII yokunambitha isithethe: ebomvu ebomvu nganye enesilinganiselo se-crystal decanter, etyhilwe phantsi kwengubo ye-LED. Iiglasi ezintandathu ezibomvu zekristale kwitreyi ekhanyayo ehamba nayo, ime ngaphandle kwesihlwele. Olubomvu ngumbala ocacileyo wamava, uthabathela umdla, umbane kunye namandla okuphila ebusuku. U-LOUIS XIII wakhonzwa kusetyenziswa ipayipi ethile yecognac, eyaziwa ngokuba yi-Spear, ukwandisa isiko lenkonzo eyehlayo. Amakha kunye namanqaku ecognac ephawulekayo anokugcinwa ngokude. U-LOUIS XIII ulungisa isingqisho sakhe ebusuku.
ISIGQIBO SAMAQHINGA NGESANDLA
U-LOUIS XIII uye wasebenzisana no-Saint-Louis, oyena mvelisi weglasi mdala eYurophu, esenza i-decanter ebomvu eyenziwe nge-N ° XIII ebomvu kunye neiglasi ze-cognac ezibomvu. Umbala obomvu odlamkileyo weglasi unokufezekiswa kuphela ngenkqubo eyimfihlo efuna ukongezwa kwegolide. Ukuthanda kukaSaint-Louis okwabelwana ngako ngesiko, i-savoir-faire kunye nokuyila kuza ebomini kwizinto ezinqabileyo ezinqabileyo: ukuvuthelwa, ukusikwa, ukuhonjiswa nokukrolwa ngesandla, kwaye kubhalwe inombolo nganye, kugqityiwe nge-LOUIS XIII utyikityo lwe-dentelle spikes kunye nentamo ye-palladium . Ukulandela isithethe sokungcamla se-N ° XIII, abathengi banokushiya iklabhu yasebusuku kunye ne-N ° XIII decanter yabo (ukuba imigaqo yeklabhu kunye nemigaqo yezomthetho yendawo iyavuma) njengesikhumbuzo esixabisekileyo sobusuku obungalibalekiyo. Isimisi esivunyelwe i-NFC sinika umnini ufikelelo olukhethekileyo kuMbutho we-LOUIS XIII kunye nazo zonke izibonelelo zobulungu.
Ixabiso lika-LOUIS XIIII N ° XIII elinconywayo liyafumaneka xa uceliwe.
Umbutho weLOUIS XIII yiklabhu yabucala yabanini beLOUIS XIII Cognac decanters.